Ukulimala kweGerbilling Mishap ezimbini - iArmagedon!
Inqaku elithi "ibali leendaba" libiza amadoda amabini akhatywe "kwi-gerbilling" ukuxhamla okubandakanya i-rodent encinci, ityhubhu yekhadibhodi kunye nomdlalo ongenamlilo. Le yindaba ekhohlisayo isasazwa ukususela ngo-1993.
I-Email ye-Gerbilling Example
Umbhalo we-imeyile ngo-1997:
Ngokuqondile kwi-LA Times:
"Ekubuyiseleni, ukukhanyisa umdlalo kwakuyiphutha lam elikhulu. Kodwa ndandizama ukubuyisela i-gerbil," u-Eric Tomaszewski watsho oogqirha abaxhambileyo kwiCandelo eliBhulu leBurns eSibhedlele saseSalt Lake. UTomaszewski, kunye nomlingani wakhe wesini esithandana naye u-Andrew "Kiki" uFarnum, wayevunyelwe ukuba unyango olungxamisekileyo emva kokuba iseshoni sokuqhawula isenze kakubi.
"Ndatshitshisa ibhodi yekhadibhodi kwinqanaba lakhe kwaye ndabetha uRoggot, i-gerbil yethu," kuchaza. "Njengesiqhelo, uKiki wamemeza esithi 'iArmagedon', into endiyifumana ngayo. Ndazama ukubuyisa uRoggot kodwa akayi kuphinda aphume kwakhona, ngoko ndangena ngaphakathi kwiphubhu ndaza ndabetha umdlalo, ndicinga ukuba ukukhanya kunokutsala kuye. "
Kwinkomfa yenkampani yokunyathelisa, isikhulumi sesibhedlele sachaza oko kwenzeka emva koko. "Umdlalo utshayile i-pocket ye-intestinal gesi kunye nomlilo udubula i-tubing, utshaya iinwele zikaMnumzane Tomaszewski kwaye zivutha kakhulu ubuso bakhe. Kwaye kwashisa umlilo kwi-gerbil kunye ne-whiskers eziye zatshisa ipokhethi enkulu yegesi iphakamisa intlungu , ukuqhubela i-rodent njenge-cannonball. "
UTomaszewski uvavanywe ngecala lesibini kunye neempumlo ephukile kwimpembelelo ye-gerbil, ngoxa i-Farnum yaxhatshazwa kwinqanaba lokuqala nelesibini elitshisa kwi-anus yakhe kunye ne-intestinal tract tract.
U-Albe uthi kubangelwa yiLos Angeles Times , le ntsizi enhle kakhulu yehlaziyiki yamanzi ayifumanekanga nakuphi na iphephandaba. Akukho mxholo okanye isitayela ehambelana nomgangatho ophantsi kunabo bonke. Iindaba ezikhohlisayo, ihlaya, okanye ngokugqithiseleyo ihlaya elingqamene nesigxina sasezidolophini kuba abantu bafuna ukunyaniseka ukuba bayinyaniso. Uhlobo lwebali lunokufumaneka kwi-post yomyalezo webhodi ye-intanethi ukusuka ngo-1993.
Igama elithi "ukuqhayisa", um, lisebenzise kakubi kwisicatshulwa. Leli gama eliyi-slang elibhekiselele kumsebenzi wesondo, kwaye loo msebenzi wesondo unento enokuyenza kunye namacangca, kodwa akukho nto enokuyenza kunye nama-gerbils. Kunokuba uzame ukunika ingcaciso echanekileyo yekota, sikuthumela kwi-Intanethi. I-Intanethi yayazi ngakumbi malunga nokuqhekeza kunokuba uya kufuna ukwazi wena. Isilumkiso esifanelekileyo.
Ngaba "iGerbil Stuffing" Ngayo Ikhona?
Ingxelo ibhekisela kumzekelo wento enqwenela ukuyibiza ngokuthi "i-gerbilling" (okanye "i-gerbil stuffing"), echazwe ngokucacileyo, yinto - isenzo sokufakela i-rodent live kwi-anus okanye umntu omnye umntu onokuzonwabisa .
Sithi "kuthiwa" kuba, nangona kunjalo ukuba igama lolo hlobo lukhona, akukho bungqina bokuba lo mkhuba ngokwawo uyenzayo. Kulungile, eqinisweni. "Bobabini ebomini bam nobuqu bomntu, amawaka abantu bavuma ngokukhululekile ukuba benze okungakumbi-apho, bungozi, bungozi, banobuqili, izinto zengqondo," umgcini weengcebiso zezocansi uDan Savage wabhala ngo-1998.
"Kodwa kungekho kanye kule minyaka yonke umntu oye wandixelela ukuba yena, okanye umntu owaziyo, uke wabeka i-gerbil esesileni sakhe.
Ibali eliqhelekileyo eliyaziwa yinkcubeko eyaziwayo yimizekelo yeCape Richard Gere , ekuthi kuthiwa umdlali wecala wayexhatshaza kwi-ward ye-HA yongxamiseko iminyaka emininzi eyadlulayo ukuba abanjwe i-gerbil ekhutshwe kwi-rectum yakhe. Cishe wonke umntu waseMelika, ndiyilingwa ukuba nditsho, uyazi umntu owaziyo umntu obiza ukuba wayekho apho uGere esetyenziswe esibhedlele, okanye owazi ugqirha owenza i-gerbilectomy, okanye umongikazi afungelwe ekusithekeni.
Nangona uGere engazange aphume ngaphandle kwaye aphikile ibali - kwaye ngokwenene, ngubani oya kufuna ukuthetha amagama athi, "Hayi andiyibeke i-gerbil kwindawo yam" - wakha wakhankanya kwi-intanethi yodliwano wathi, "Ndiyeke ukufunda umshicileli kwixesha elidlulileyo." Izinto ezininzi eziphambukayo zafika malunga nam kuqala, ngakumbi kwi-tabloids.
Le ndoda ayayazi i-hamster esuka kwi-gerbil. Ziziphi iimeko ezinokubambisana naye?